ဒုက်ခသညျ နှဈရာခနျ့ ခငျြးပွညျနယျ-ဘင်ျဂလာနယျခွားမှာ အကူအညီမဲ့ ခိုလှုံနကွေရ – Kyaw Zaw Oo's Blog
February 5, 2019 February 19, 2019 kyaw zaw oo
ဒုက်ခသညျ နှဈရာခနျ့ ခငျြးပွညျနယျ-ဘင်ျဂလာနယျခွားမှာ အကူအညီမဲ့ ခိုလှုံနကွေရ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ သုံးရက်နေ့ ညနေပိုင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် Bangladhara သတင်းက တင်တဲ့သတင်းမှာ မြန်မာ ဒုက္ခသည် အယောက်နှစ်ရာခန့် ဟာ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် Tidaung ဆိုတဲ့ နေရာကို ရောက်နေကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဘက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေနေရာချထားပြီး ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေက ခူမီး၊ ချင်း နဲ့ ရခိုင်လူမျိုး ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ နဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းသိရလောက် အခုအချိန်အထိ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အကူအညီကမှ သူတို့ဆီကို ရောက်လာနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အဲသည်ဒုက္ခသည်တွေဆီကို အဖြစ်နိုင်ဆုံးသော နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေပြီး အဆောတလျင် အကူအညီပေးကြဖို့ကို ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
အောက်ဖက်မှာ Bangladhara သတင်းဌာနရဲ့ မူရင်းသတင်းကို google translate သုံးပြီး ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်၊ ၁၄း၀၀ နာရီ
“မြန်မာဘက်က ဒုက္ခသည် ၂၀၀ ခန့် ဘန်ဒရာဘန်ခရိုင်နယ်စပ်အနီး ရောက်ရှိနေ”
Publication: 019-02-03 19:16:20 || Update: 2019-02-03 19:16:26
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဘက်ကို ၀င်လာမယ့် သဘောရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် (၂၀၀)ခန့်ဟာ ဘန်ဒရာဘန်ခရိုင်ရဲ့ မိုင်တိုင်အမှတ် (၇၂) လောက်ဝန်းကျင်မှာ ခိုလှုံနေကြပါတယ်။ ဒေသခံများရဲ့အပြောအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲမှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Ruma ရဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နယ်ခြားကနေ ဘင်္ဂလာဘက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှပိုင်နက်နယ်မြေထဲကို အဲသည် ဒုက္ခသည်တွေ ၀င်ရောက်လာမှာကို တားဆီးပိတ်ပင်နိုင်ဖို့အတွက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (BGB) ကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့ လေးဖွဲ့ကို အဲသည်နယ်ခြားနေရာတွေနားမှာ တာဝန်ချထား လိုက်ပါ တယ်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲကို အဲဒီဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ၀င်မလာနိုင်အောင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ထား လိုက်ပြီ လို့ ဘန်ဒရာဘန်နယ်မြေ စစ်ဘက်ကွပ်ကဲရေမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး Zahirul Islam က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
၀င်ရောက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ နယ်နမိတ်နယ်ခြားတွေဆီကို ကင်းလှည့်တပ်ဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ထားပါတယ်။ Remakri Panscha နယ်မြေရဲ့ ဥက္ကဌ Gira Bam ကပြောတာကတော့ – နယ်ခြားရဲ့တစ်ဘက် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ပလက်ဝမြို့နယ် ရဲ့ ထရော်အိုင် ၊ ကတ်တလင်း ၊ Khamangwa စတဲ့ နေရာတွေမှာ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေ ဗုံးတွေ နဲ့ အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲသည်နေရာတွေက ခူမီး၊ ချင်း၊ ရခိုင်လူမျိုး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နဲ့ ကလေးငယ်တွေ အရေအတွက် (၂၀၀) ခန့်ဟာ ထွက်လာကြပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့နိုင်ငံထဲကို ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အဆိုအရ – အဲသည် ဒုက္ခသည်တွေဟာ Ruma မြို့နယ် Roma Pransaji Union ရဲ့ Cheykhaing နယ်ခြားရဲ့ တစ်ဘက်နယ်ခြား မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့ Tidaung ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဒုက္ခသည်တွေ ဟာ လောလောဆယ် ရောက်နေကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေ ဟာ Chyaksiang ပရာ ၊ Nepal ပရာ နဲ့ ဘန်ဒရာဘန် နယ်ခြားတို့ကနေ ၀င်ရောက်လာနိုင်ခြေ ရှိနေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
မူရင်း သတင်း link –
“বান্দরবান সীমান্তে মিয়ানমারের প্রায় দুইশ শরণার্থী”
“Nearly 200 refugees from Myanmar at Bandarban border”
প্রকাশ: ২০১৯-০২-০৩ ১৯:১৬:২০ || আপডেট: ২০১৯-০২-০৩ ১৯:১৬:২৬
নুসিং থোয়াই মারমা, বান্দরবান »
Nusing Thoi Marma, Bandarban »
বাংলা‌দে‌শে অনুপ্রবেশের জন্য বান্দরবানের রুমা উপজেলার রেমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ৭২ নম্বর পিলার এলাকায় প্রায় দুইশ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা জানায়, বেশ কিছু দিন ধরে মিয়ানমারের চীন রাজ্যের প্লাকওয়া এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আরাকান আর্মির সাথে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে এসব শরণার্থী রুমা উপ‌জেলার দূর্গম সীমান্ত প‌থে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে পারে।
About two hundred refugees have taken shelter in pillar 72 in the border area of ​​Ramakrishna Prangsa union of Ruma Upazila of Bandarban for the infiltration in Bangladesh. Locals said that forafew days, the army’s extensive clashes between the separatist Arakan Army in Plakwa area of ​​Myanmar’s Chin state are underway. In the face of army attack, these refugees may try to enter Bangladesh on the remote border of Ruma upazila.
তবে শরণার্থীরা যাতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য রুমা ব্যাটালিয়নের সেনাবাহিনী ও বিজিবির ৪টিরও বেশি টহল দল এখন সীমান্তে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।
But the Ruma Battalion’s army and Border Guard Bangladesh (BGB) more than4patrol teams are now located on the border to prevent refugees from entering the territory of Bangladesh.
বিজিবির বান্দরবান সেক্টরের সেক্টর অধিনায়ক কর্নেল জহিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, শরণার্থীরা যাতে কোনোভাবেই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্তে সতকর্তা জারি করা হয়েছে।
Bandarban sector commander Colonel Zahirul Islam told reporters that the law enforcers had been issued on the border so that the refugees could not enter Bangladesh in any way.
সীমান্তের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে টহল দলও পাঠানো হয়েছে। রেমাক্রী পাংসার ইউপি চেয়ারম্যান জিরা বম জানান, সীমান্তের ওপারে চীন রাজ্যের প্লাকওয়া এলাকার কান্তালিন, খামংওয়া, তরোয়াইন এলাকাগুলোতে হেলিকপ্টার থেকে ব্যাপক গুলি ও বোমাবর্ষণ করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এসব জায়গা থেকে মিয়ানমারের খুমি, খেয়াং, বম ও রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ নারী-পুরুষ ও শিশু আতংকে বাংলাদেশের সীমান্তে অনুপ্রবেশের জন্য অ‌পেক্ষা কর‌ছে।
A patrol team has also been sent to the potential sites of the border. Remakri Panscha UP chairman Gira Bam said that the Myanmar army is firing heavily from the helicopter and bombs in Kantalin, Khamangwa, Toroyain areas of Plakwa area of ​​China state beyond the border. From these places, about 200 men, women and children of Myanmar’s Khumi, Khayang, Bam and Rakhine communities are awaiting intrusion into the border of Bangladesh.
‌তি‌নি ব‌লেন, তারা এখন রুমা উপজেলার রোমাক্রী প্রাংসা ইউনিয়নের চাইক্ষিয়াং সীমান্তের ওপারে তিদং এলাকায় জড়ো হয়েছে। এসব শরণার্থী বান্দরবান সীমান্তের চাইক্ষিয়াং পাড়া, নেপু পাড়াসহ কয়েকটি পাড়ায় প্র‌বে‌শের চেষ্টা করতে পারে।
He said that they are now gathered in Tidang area on the other side of the Cheykhiang border of Romakri Pransaji Union of Ruma Upazila. These refugees may try to enter some of the para, including the Chyaksiang Para, Nepal Para and the Bandarban border.
Bangladesh / ns / nt / b
Previous စဈ ၏ အနိဋ်ဌာရုံမြားကို ကနျ့သတျသညျ့ ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးမြား အကွောငျး အနှဈခြုပျ
Next ခတျေအဆကျဆကျ မွနျမာနိုငျငံ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒမြေား (download)